TCDD 191 Shaqaalaha Sarkaalka Shaqaaleynta Taariikhda iyo Shuruudaha Codsiga | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaTCDD 191 Sarkaalka Shaqaalaha Iibsashada Taariikh iyo Shuruudaha Codsiga
21 / 03 / 2018 Shaqooyinka, GUUD, TURKEY
Shaqaalaynta shaqaalaha waxaa lagu sameeyey war-murtiyeedka lagu daabacay War-saxaafadeed rasmiga ah maalinta ka horeysa qorista saraakiisha 191 ee TCDD. Ka dib markii la dhisay cadawga, shaqaalaha rayidka ahi waxay bilaabeen inay sugaan ogeysiisyo. Goorma xayeysiisyada la daabici doonaa? Waa maxay shuruudaha codsiga? Sidee loo codsan doonaa codsiyada?
Tareennada State ee Jamhuuriyadda Turkey waxaa la aasaasay for qorista shaqaalaha si Agaasinka Guud.
Faafinta rasmiga go'aanka, Agaasinka Guud ee State Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkey iyo 4 187 qareen shaqaalaha surveillance for hordhaca ah ee shaqaalaha ah soo dhaweynta lagu qabtay. Kadib sameynta shaqaalaha, musharrixiinta shaqaalaha rayidka ah ayaa bilaabay inay baaraan marka shaqaalaynta shaqaaluhu ay noqonayaan iyo shuruudaha codsiga. Waxaan ku darnay faahfaahinta shaqaalaha 191 ee lagu soo bandhigay TCDD warkeena.
KA QAADASHO LAWYER
Qareenka qorista ee TCDD waxaa loo sameeyey si cad. Agaasimaha Guud ee iibsashada Qalinjabiyeyaasha Kulliyadda Sharciga ayaa la filayaa in lagu daabaco bogga rasmiga ah ee Madaxa Shaqaalaha Dawlada ee Bilaha soo socda. Waxaan la wadaageyn doonnaa xayeysiinta aan la socono dadka aan isla joogno. Raac kopscafe si aad u ogaato marka xayeysiiska la daabaco.
Shaqaalaynta shaqaalaha 187, oo loo sameeyay TCDD, ayaa lagu samayn doonaa meeleyn dhexe. Qiimaha iibka badan ee la sameeyay KPSS 2017 / 2 sannadkii hore ayaa la rajeynayaa in la sameeyo 2018 / 1 sannadkan. Ma jiri doonto hadal ama wareysi kale oo ku saabsan ballanta Dhexe ee la baarayo haddii musharraxiintu ay buuxinayaan shuruudaha codsiga iyo dhibcaha KPSS ee ka sarreeya qorista ee la sameynayo meelaynta dhexe.
Xaaladaha CODSIGA DHAQAALAHA
Markaan eegno tilmaamaha codsiga meelaynta, waxaa loo arkaa in ay soo iibsadeen 1101 3206 7225 7257 7300 7327 codsiyada aqoonsiga shaqaalaha sannadkii hore.
Xeerka aqoonsiga 1101 waxaa loola jeedaa: Farsamada Daryeelka Degdegta ah, Farsamada Gargaarka Degdegga ah, Ambalaaska iyo Takhasusaha Daryeelka Gurmadka, Adeegyada Gargaarka Degdegga ah, Gargaarka Degdegga ah, Ambalansiga iyo Daryeelka Degdegga ah, barnaamijyada qalin-jabinta degdega ah ee koowaad iyo gargaarka degdega ah
3206 CODSADEEDKA: Nidaamka Isgaadhsiinta Qalabka Korontada iyo Farsamada elektaroonigga ah ama Nidaamyada Tareenka Qalabka Korontada iyo Iskutar Technology
XNYX Xulashada Aqoonsiga: Natiijada Hawlgalka Baaritaanka Amniga
XNYX Xulashada Caadiga ah: Ku habboon shaqada socdaalka iyo goobta shaqada
XNYX CODSIGA: Nidaamka shift wuxuu ku dabaqayaa xulkan.
MARKA AAD U HELI KARAA?
Shaqaalaha kormeerka waxaa dooran doona xarunta soo dhaweynta. Jadwalka meeleeynta dhexe waa sida soo socota;
2018 MEESHA LAGU QAATO KPSS
Ururinta codsiyada meeleynta ee hay'adaha dawliga ah iyo ururada by DPB Qaadashada doorbidada madaxweynaha OSYM
KPSS 1. meelaynta 12 Maarso - 11 May 2018 26 Juun - 05 July 2018
KPSS 2. meelaynta 06 Agoosto - 05 Oktoobar 2018 11 - 20 December 2018
Shuruudaha Codsiga Dalabka TCDD 38 iyo Taariikhda Shaqaalaha Qorista Shaqaalaha
1.118 Sarkaal u shaqeynaya TCDD: Kaliya 5 Shakhsi Xayeysiis ah ayaa la daabacay!
Mashruuca Tareenka Kayseri ayaa laga wada hadlay